कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुने संभावना कत्तिको छ? – Dcnepal
प्रकाशित : २०७६ चैत १३ गते ९:५२
बीबीसी। बेलायत सरकारका वैज्ञानिक सल्लाहकारका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मानिसको मृत्यु हुने आशंका मात्र ० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतबीचमा हुन्छ।
कोरोना संक्रमणमा यो मृत्युदर कम हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभरमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको दर ४ प्रतिशत छ। मार्च २३ मा बेलायतमा यो दर पाँच प्रतिशतसम्म थियो। किनभने यहाँ संक्रमित सबैको पुष्टि भएको थिएन।
कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये कसलाई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने विषयमा सबै देशका आ–आफ्नै मापदण्ड छन्। यही कारण फरक फरक मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण र यसबाट हुने मृत्युको तथ्यांक भ्रामक हुन सक्छन्। साथै मृत्युदर व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा पनि निर्भर गर्छ।
कोरोनाले मेरो ज्यानलाई कति खतरा छ?
जानकारहरुका अनुसार कोरोना संक्रमणले ती मानिसको ज्यान खतरामा हुनसक्छ, जो बृद्ध छन् र जसलाई पहिलादेखि नै स्वास्थ्यमा समस्या छ।लन्डनको इम्पिरियल कलेजको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८० वर्षभन्दा धेरै उमेरका लागि औसत मृत्युदर करिव १० गुणा धेरै छ, जबकि ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि मृत्युदर कम छ।
बेलायत सरकारका मुख्य चिकित्सक सल्लाहकार प्रोफेसर क्रिस ह्विट्टी भन्छन्–वृद्धका लागि मृत्युदर धेरै भएपनि धेरे वृद्धहरुमा अन्य रोगको लक्षण पनि कारण बन्न सक्छ।’
उनी चेतावनी दिँदै यो संक्रमणबाट युवामा कम खतरा भएको मान्न नहुने बताउँछन्। कयौं युवा पनि यो भाइरसका कारण आइसीयूमा पुगिसकेका छन्। उनका अनुसार कोरोनाको खतरालाई सिधै उमेर समूहसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन।
पहिलो पटक चीनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ४४ हजार केसको विश्लेषण गरिएको थियो। जसलाई पहिला नै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, दमको रोग थियो, त्यस्ता विरामीको मृत्युदर पाँच गुणा बढी थियो।
यी सबै कारक एकै पटक मानिसको शरीरमा काम गर्छन्। अहिलेसम्म हामीसँग के जानकारी छैन भने विश्वका अलग अलग ठाउँका अलग अलग प्रकारमा मानिसमा यो भाइरसको कस्तो खतरा छ?
अहिले कोरोना संक्रमितको मृत्युदरलाई मध्यनजर गर्दै के भन्न सकिन्छ भने कस्ता मानिसलाई कोरोना संक्रमणको धेरै खतरा छ? तर कुनै खास प्रकारका मानिसलाई कति र कस्तो खतरा छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। कोरोना संक्रमितमा मृत्युदरको कुल औसत मृत्युदर छैन।
भाइरस संक्रमित धेरै जसो केसमा व्यक्तिमा सामान्य लक्षण देखिन्छ। र यही कारण उनीहरु डाक्टरकहाँ जाँदैनन्। यस्तोमा के भन्न सकिन्छ भने संक्रमणका धेरै जसो केश सार्वजनिक नै हुँदैनन्।
यही वर्ष मार्च १७ मा बेलायतका लागि मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकार सर प्याट्रिक वालेन्सले बेलायतमा कोरोना संक्रमणका करिव ५५ हजार केश आउने अनुमान लगाएका थिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बेलायतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका करिव ६ हजार ६ सयभन्दा धेरै केश पुष्टि भइसकेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण बेलायतमा हालसम्म ३३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाका कारण भएको मृत्युलाई यदि २ हजारले विभाजन गर्ने हो भने जुन मुत्यृदर प्राप्त हुन्छ जब मृत्युलाई ५५ हजारले विभाजन गर्नुहुन्छ।
अलग अलग देशमा किन अलग अलग मृत्युदर छ?
इन्पिरियल कलेजद्वारा गरिएको एक शोधका अनुसार संक्रमणका सामान्य भन्दा सामान्य लक्षण पहिचान गर्न अलग अलग देशका अलग अलग क्षमता हुन सक्छ।
भाइरसको जाँच गर्न अलग अलग देशमा अलग अलग तरिका अपनाइको छ। जाँच गर्ने क्षमता पनि देशै पिच्छे फरक हुन्छ। यो सबै समयक्रमसँगै परिवर्तन भइरहेको छ।
सुरुका दिनमा बेलायत सरकारले प्रतिदिन १० हजार जाँच गथ्र्यो। आगामी चार हप्तामा सरकारले यसलाई बढाएर दैनिक २५ हजार जाँच गर्ने योजना बनाइरहेको छ। अहिले अस्पतालमा नै यो जाँच भइरहेको छ।
जर्मनीसँग एक दिनमा करिव २० हजार मानिसको जाँच गर्ने क्षमता छ र जुन मानिससँग संक्रमणको सामान्य लक्षण देखिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिको पनि जाँच गर्ने गरिन्छ।
यसकारण जर्मनीमा अहिलेसम्म जति संक्रमणका केश देखिएका छन्, तीमध्ये गम्भीर केश र साधारण संक्रमणका केशको तथ्यांकलाई स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
जर्मनीमा केरोना पुष्टि भएका केशमा मृत्युदर करिव ० दशमलव ५ प्रतिशत र यो पूरै युरोपमा सबैभन्दा कम हो। तपाईँको रोगको पहिचान र त्यसको उपचारले कस्तो उपचार उपलब्ध छ र स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। र त्यसले महामारी कुन स्टेजमा छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
यदि कुनै देशको स्वास्थ्य सेवा क्षमता भन्दा अत्याधिक संख्यामा यस्ता विरामी आए, जसलाई आइसीयूमा राख्नुपर्नेहुन्छ भने त्यहाँ मृत्युदर बढ्न सक्छ।